“राजा,आउ देश बचाउ भन्दै जन सागर उत्रियो अब के,होला हेर्नुहोस? – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
“राजा,आउ देश बचाउ भन्दै जन सागर उत्रियो अब के,होला हेर्नुहोस?
“राष्ट्रिय झण्डा र पूर्व राजा-रानी ज्ञानेन्द्र-कोमल शाहको तस्वीर अंकित टिसर्ट लगाएर तिलोत्तमाको मणिग्रामबाट बुटवलको ट्राफिक चोकसम्म र्‍याली निकालिएको हो ।
“र्‍यालीमा करिब २ हजार मोटरसाइकल सहभागी रहेका आयोजकको दाबी छ । गणतन्त्र स्थापनापछि रुपन्देहीमा राजसंस्थाको पक्षमा भएको यो प्रदर्शन अहिलेसम्मकै ठूलो भएको बुटवल रामार्ग चौराहाका बासिन्दा कृष्ण श्रेष्ठले बताए ।
“र्‍यालीपछि ट्राफिकचोकमा भएको कोणसभामा बोल्दै कार्यक्रम संयोजक बसन्तविक्रम पाण्डे, रुपन्देही संयोजक प्रवीन थापा, डिल्लीराज खनाललगायतले राष्ट्रिय एकता र स्थिरताका लागि राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनः स्थापना आवश्यक रहेको तर्क गर्दै यसका लागि देशव्यापी अभियान सञ्चालन गरिने बताए ।
“उनीहरुले दलको नेतृत्व असफल भएको, राष्ट्रियता कमजोर बनेको र भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको आरोप लगाउँदै राजसंस्थाको पुनःस्थापनाबाट मात्रै देशले निकास पाउने दलिल पेस गरेका थिए ।
Previous कुलमान घिसिङलाई हटाए सँगै विद्युत प्राधिकरण दैनिक ५ करोड घाटा बेहोर्दै,मुसा ,बाँदरको विगविगिले लोडसेडिङ सदैव,हेर्नुहोस।
Next “ओलि को एकलौटी रजाइँ देखेर असन्तुष्ट प्रचण्ड मजबुत अब पार्टी फुट्ने पक्का।